Sony Xperia XA1 Dual Review By MS Mobile Store - Myanmar End User
By Myanmar End User May 2, 2017 3452 views
Sony မှ မကြာခင် Lanunchလုပ်တော့မယ့် New Models ထဲက တစ်ခုုဖြစ်တဲ့ XA1 dual ကို MS Mobile Store မှ ပထမဆုံး အနေဖြင့် ဂုဏ်ယူစွာ Review ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
Special Thanks to TMW Enterprise Limited for letting us Review to this phone.
XPERIA XA1 Dual Review by MS Mobile Store
Sony မှ မကွာခငျ Lanunchလုပျတော့မယျ့ New Models ထဲက တဈခုဖွဈတဲ့ XA1 dual ကို MS Mobile Store မှ ပထမဆုံး အနဖွေငျ့ ဂုဏျယူစှာ Review ရေးသားလိုကျပါတယျ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းပေါ့။ ကိုင်ရတာလည်း ပိုကောင်းသွားတယ်။ ပြီးတော့စတိုင်လည်း ပိုကျသွားတယ်။ ပုံစံကလည်း Xperia XZ နဲ့ ပုံစံတူသွားတာမလို့ Premium feeling ကို အပြည့်အဝခံစားရတယ်။ Mid-range lineup ထဲမှာ ပေးရမယ့်ဈေးနဲ့ ကိုင်ရတဲ့ ကွာလတီတန်တယ်လို့ပဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ ထောင့်အချိုးလေးတွေ ပိုလှလာတယ်။ screen ကိုလည်း ထောင့်လုံးပုံစံလေး ဖန်တီးထားတာမလို့ တော်တော်လေးကို လှတဲ့ ဒီဇိုင်းအမြင်နဲ့ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
XA1 ကိုတော့ ယခင် XA လိုပဲ ၅လက်မ မျက်နှာပြင်ကို ဆက်လက် အသုံးပြုထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မျက်နှာပြင် အရည်အသွေးဟာလည်း ယခင် XA လိုမျိုး 720 x 1280 HD Resolution ကို ဆက်လက် အသုံးပြုထားတာကိုလည်း တွေရပါတယ်။ အဆိုပါ မျက်နှာပြင်ကိုလည်း SONY ရဲ့ အသုံးပြုနေကြဖြစ်တဲ့Scratch Resistant glass နဲ့ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ Edge to Edge Display ကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် Photo နဲ့Video ကြည့်ရှုရာတွင် Screen အပြည့်မြင်ကွင်းမျိူးကို ကြည့်နေရသလို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနနေဲ့ ဒီဇိုငျးပိုငျးပေါ့။ ကိုငျရတာလညျး ပိုကောငျးသှားတယျ။ ပွီးတော့စတိုငျလညျး ပိုကသြှားတယျ။ ပုံစံကလညျး Xperia XZ နဲ့ ပုံစံတူသှားတာမလို့ Premium feeling ကို အပွညျ့အဝခံစားရတယျ။ Mid-range lineup ထဲမှာ ပေးရမယျ့ဈေးနဲ့ ကိုငျရတဲ့ ကှာလတီတနျတယျလို့ပဲ ပွောလို့ရပါတယျ။ ထောငျ့အခြိုးလေးတှေ ပိုလှလာတယျ။ screen ကိုလညျး ထောငျ့လုံးပုံစံလေး ဖနျတီးထားတာမလို့ တောျတောျလေးကို လှတဲ့ ဒီဇိုငျးအမွငျနဲ့ တှေ့ရမှာဖွဈပါတယျ။
XA1 ကိုတော့ ယခငျ XA လိုပဲ ၅လကျမ မကြျနှာပွငျကို ဆကျလကျ အသုံးပွုထားတာကို တှေ့ရပါတယျ။ မကြျနှာပွငျ အရညျအသှေးဟာလညျး ယခငျ XA လိုမြိုး 720 x 1280 HD Resolution ကို ဆကျလကျ အသုံးပွုထားတာကိုလညျး တှရေပါတယျ။ အဆိုပါ မကြျနှာပွငျကိုလညျး SONY ရဲ့ အသုံးပွုနကွေဖွဈတဲ့Scratch Resistant glass နဲ့ကာကှယျပေးထားပါတယျ။ Edge to Edge Display ကို အသုံးပွုထားတာကွောငျ့ Photo နဲ့Video ကွညျ့ရှုရာတှငျ Screen အပွညျ့မွငျကှငျးမြိူးကို ကွညျ့နရေသလို ခံစားရမှာဖွဈပါတယျ။
ဆိုနီဆိုက တည်းကိုက ကင်မရာကောင်းပြီးသားပါပဲ။ ဒါကလည်း အားသာချက်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ခု XA1 မှာလည်း ကင်မရာပိုင်း အနေနဲ့ ယခင်နှစ် Model နဲ့ မတူတာက 23 Megapixel primary camera ပါဝင်ပြီး Selfie သမားတွေ အတွက်တော့ 8 Megapixel 23mm Wide angle lens တပ်ဆင်ထားပေးတာမလို့ ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး မြင်ကွင်းကျယ်ဖြစ်စေမယ့် အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မြင်ကွင်းကျယ် Selfie ရိုက်ကူးနိုင်တာမလို့ Group selfie တွေမှာလည်း သင့်နဲ့အတူ ဘော်ဒါတွေ တစ်အုပ်ကြီး တစ်ယောက်မှ ကျန်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲ ရိုက်ကူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 23 Megapixel Primary cameraကို ယခုModelမှာ တပ်ဆင်ထားပေးပြီး Predictive Hybrid Autofocus ပါဝင်တာမလို့ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်ကူးနိုင်သလို ရွေ့လျားနေတဲ့ objectတွေကို မျက်ခြေမပြတ်ပဲလိုက်လံပြီး focus ဖမ်းယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 24mm Wide angle lens ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် မြင်ကွင်းကျယ် wide view photography တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး 5x Clear Image Zoom စနစ် ထည့်သွင်းတာမလို့ zoom ဆွဲရာမှာလည်း ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Exmor RS mobile image sensor with F2.0 lens ကို အသုံးပြုထားတာမလို့ Low light နဲ့ ပတ်သတ်သော အလင်းအားနည်းသော နေရာများ သို့မဟုတ် ညပိုင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုများတွင်လည်း အလင်းရောင် အားကောင်းသော ပုံများကို ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ 3C လို့ တင်စားထားတဲ့ Clarity/ Color / Contrast အကုန် ကောင်းမွန်တာမလို့ ကြည်လင်ပြတ်သား အရောင်သွေး စိုပြေသော ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးနိုင်ခြင်းဟာလည်း ဖုန်းဖြင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းကို နှစ်ခြိုက်သူများအတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ။
ဆိုနီဆိုက တညျးကိုက ကငျမရာကောငျးပွီးသားပါပဲ။ ဒါကလညျး အားသာခကြျတှထေဲက တဈခုပါပဲ။ ခု XA1 မှာလညျး ကငျမရာပိုငျး အနနေဲ့ ယခငျနှဈ Model နဲ့ မတူတာက 23 Megapixel primary camera ပါဝငျပွီး Selfie သမားတှေ အတှကျတော့ 8 Megapixel 23mm Wide angle lens တပျဆငျထားပေးတာမလို့ ကွညျလငျပွတျသားပွီး မွငျကှငျးကယြျဖွဈစမေယျ့ အမှတျတရပုံရိပျတှကေို ရိုကျကူးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ နောကျပွီး မွငျကှငျးကယြျ Selfie ရိုကျကူးနိုငျတာမလို့ Group selfie တှမှောလညျး သငျ့နဲ့အတူ ဘောျဒါတှေ တဈအုပျကွီး တဈယောကျမှ ကနြျခဲ့ခွငျးမရှိပဲ ရိုကျကူးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ 23 Megapixel Primary cameraကို ယခုModelမှာ တပျဆငျထားပေးပွီး Predictive Hybrid Autofocus ပါဝငျတာမလို့ ကွညျလငျပွတျသားစှာ ရိုကျကူးနိုငျသလို ရှေ့လြားနတေဲ့ objectတှကေို မကြျခွမေပွတျပဲလိုကျလံပွီး focus ဖမျးယူနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ 24mm Wide angle lens ကို အသုံးပွုထားသောကွောငျ့ မွငျကှငျးကယြျ wide view photography တှကေို ရိုကျကူးနိုငျမှာဖွဈပွီး 5x Clear Image Zoom စနဈ ထညျ့သှငျးတာမလို့ zoom ဆှဲရာမှာလညျး ကွညျလငျပွတျသားစှာ ဆှဲနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ Exmor RS mobile image sensor with F2.0 lens ကို အသုံးပွုထားတာမလို့ Low light နဲ့ ပတျသတျသော အလငျးအားနညျးသော နရောမြား သို့မဟုတျ ညပိုငျး ဓာတျပုံရိုကျကူးမှုမြားတှငျလညျး အလငျးရောငျ အားကောငျးသော ပုံမြားကို ရရှိနိုငျမညျ ဖွဈပါသညျ။ 3C လို့ တငျစားထားတဲ့ Clarity/ Color / Contrast အကုနျ ကောငျးမှနျတာမလို့ ကွညျလငျပွတျသား အရောငျသှေး စိုပွသေော ဓာတျပုံမြားကို ရိုကျကူးနိုငျခွငျးဟာလညျး ဖုနျးဖွငျ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဓာတျပုံရိုကျကူးခွငျးကို နှဈခွိုကျသူမြားအတှကျ သတငျးကောငျးတဈခုပါပဲ။
Dual SIM အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Sim cardကို နှစ်ကဒ်တပြိုင်တည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အားသာချက်အနေဖြင့် Ooredoo နှစ်ကဒ်တပြိုင်တည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Internal Storage အနေဖြင့် 32GB built in ပါဝင်လာပြီး Expandable Storage အနေဖြင့် Micro SD 256GB အထိ တိုးချဲ့ အသုံးပြုနိင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
XA1 တွင် MediaTek ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်တဲ့Helio P20 MT6757 series ကို အသုံးပြူထားခြင်းကြောင့် ယခင် XA model ကို အသုံးပြုခဲ့သော Helio P10 ထက် နှစ်ဆ ပိုမိုကောင်းမွန်လာတာကို တွေ့ရပြီး Graphic အပိုင်းမှာလည်း Mali-T880MP2 အထိ တိုးမြင့်ထားသောကြောင့် Graphic ပိုင်းသိသိသာသာ ကောင်းမွန်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Software ပိုင်း အနေနဲ့ Android OS Nougat 7.0 ဖြင့်မောင်းနှင်ထားပြီး Myanmar Zawgyi font built in ပါဝင်လာသောကြောင့်မြန်မာစာဖောင့်ရှယ်အသုံးပြုလိုသော Users များအတွက် ဝမ်းသာစရာ သတင်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Type C Connector အမျိုးအစားကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးထားပြီး ယခင် XA မှာလိုပဲ 2300mAh ပမာဏရှိ ဘက်ထရီကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားပါတယ်။ Talktime အနေဖြင့် 10 Hours နဲ့ Standby အနေဖြင့် 3G စနစ်တွင် 603 Hours အထိ ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
အားနည်းချက်အနေနဲ့ကတော့ Fingerprint မပါဝင်ခြင်းနှင့် Water resistant မဖြစ်ခြင်းပါပဲ။ ဒါကလည်း သူ့ ဈေးတန်းအနေဖြင့် လျှစ်လျူရှုလို့ရနိုင်တဲ့ အချက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
Dual SIM အမြိုးအစားဖွဈပွီး Sim cardကို နှဈကဒျတပွိုငျတညျး အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ အားသာခကြျအနဖွေငျ့ Ooredoo နှဈကဒျတပွိုငျတညျး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
Internal Storage အနဖွေငျ့ 32GB built in ပါဝငျလာပွီး Expandable Storage အနဖွေငျ့ Micro SD 256GB အထိ တိုးခြဲ့ အသုံးပွုနိငျတာကို တှေ့ရပါတယျ။
XA1 တှငျ MediaTek ရဲ့မြိုးဆကျသဈဖွဈတဲ့Helio P20 MT6757 series ကို အသုံးပွူထားခွငျးကွောငျ့ ယခငျ XA model ကို အသုံးပွုခဲ့သော Helio P10 ထကျ နှဈဆ ပိုမိုကောငျးမှနျလာတာကို တှေ့ရပွီး Graphic အပိုငျးမှာလညျး Mali-T880MP2 အထိ တိုးမွငျ့ထားသောကွောငျ့ Graphic ပိုငျးသိသိသာသာ ကောငျးမှနျလာတာကို တှေ့ရပါတယျ။ Software ပိုငျး အနနေဲ့ Android OS Nougat 7.0 ဖွငျ့မောငျးနှငျထားပွီး Myanmar Zawgyi font built in ပါဝငျလာသောကွောငျ့မွနျမာစာဖောငျ့ရှယျအသုံးပွုလိုသော Users မြားအတှကျ ဝမျးသာစရာ သတငျးကောငျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။
Type C Connector အမြိုးအစားကို ပွောငျးလဲတပျဆငျပေးထားပွီး ယခငျ XA မှာလိုပဲ 2300mAh ပမာဏရှိ ဘကျထရီကို ထညျ့သှငျး အသုံးပွုထားပါတယျ။ Talktime အနဖွေငျ့ 10 Hours နဲ့ Standby အနဖွေငျ့ 3G စနဈတှငျ 603 Hours အထိ ကွာရှညျစှာ အသုံးပွုနိုငျမှာ ဖွဈပါသညျ။
အားနညျးခကြျအနနေဲ့ကတော့ Fingerprint မပါဝငျခွငျးနှငျ့ Water resistant မဖွဈခွငျးပါပဲ။ ဒါကလညျး သူ့ ဈေးတနျးအနဖွေငျ့ လြှဈလြူရှုလို့ရနိုငျတဲ့ အခကြျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။
XA1 Dual ကို လာမည့်လ May 11th တွင် TMW Enterprise Company မှ တရားဝင် စတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီး ဈေးတန်းအနေဖြင့် ၃သိန်းခွဲဝန်းကျင်နဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Cover/ Screenguard အား Gift အနေဖြင့် ရရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် ကုပ္မဏီအနေဖြင့် ကာဗာ မှန်ကပ်ရှားပါးသော ပြသနာကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးထားပါတယ်။ Zawgyi မြန်မာစာစနစ်လည်း Official ပါဝင်မယ်ဆိုတော့ ကဲဘာလိုသေးလဲဗျာ?
ဈေးနှုန်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့ မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှပဲ Official announces လုပ်မှာမလို့ အားလုံးပဲ Stay Tuned လုပ်ပေးကြပါလို့….
XA1 Dual ကို လာမညျ့လ May 11th တှငျ TMW Enterprise Company မှ တရားဝငျ စတငျရောငျးခမြှာဖွဈပွီး ဈေးတနျးအနဖွေငျ့ ၃သိနျးခှဲဝနျးကငြျနဲ့ ဝယျယူရရှိနိုငျမညျ ဖွဈပါသညျ။ Cover/ Screenguard အား Gift အနဖွေငျ့ ရရှိမညျဖွဈသောကွောငျ့ ကုပ်မဏီအနဖွေငျ့ ကာဗာ မှနျကပျရှားပါးသော ပွသနာကိုလညျး ဖွရှေငျးပေးထားပါတယျ။ Zawgyi မွနျမာစာစနဈလညျး Official ပါဝငျမယျဆိုတော့ ကဲဘာလိုသေးလဲဗြာ?
ဈေးနှုနျး အသေးစိတျအခကြျအလကျမြားကိုတော့ မလေ ၁၁ ရကျနေ့မှပဲ Official announces လုပျမှာမလို့ အားလုံးပဲ Stay Tuned လုပျပေးကွပါလို့….